Shina: Fihazàna Ivelan’ny Fari-piadidiana Mahazo Mpanao Gazety Iray Mpanadihady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2012 4:43 GMT
Zhou Xiaoyun, mpanao gazety mpanadihady, monina ao amin'ny faritanin'i Guangdong any Shina, dia karohin'ny manampahefana avy amin'ny governemanta ao amin'ny fileovan'i Funing, faritra Jiangsu, taorian'ny namoahany tranganà kolikoly goavana iray. Nanomboka ny 14 Aogositra 2012, niantso vonjy tamin'ny alàlan'ireo sehatra tambajotra sosialy maro samihafa i Zhou.
Tokony ho tamin'ny 10:30 maraina ny 14 Aogositra, taorian'ny nivoahan'ity lahatsoratra [zh] manaraka ity tao amin'ny famoahan'i Zhou, tao amin'ny sehatra fitorahana bilaogy kiritika Sina Weibo. Amin'ny fotoana anoratana ny lahatsoratra dia efa in-15.700 no naverina naparitaka izy io :
sary ao amin'ny mombamomba an'i Zhou Xiaoyun ao amin'ny Sina Weibo.
[Karohan'ireo manampahefana ivelan'ny fari-piadidiany i Zhou Xiaoyun taorian'ny namoahany tranganà kolikoly goavana] Navoakako ny taratasy ofisialy avy amin'ny polisin'ny fileovana ao Jiansu Funing izay manendry mpanao heloka bevava 61 ao anatin'ny asam-panjakana. Ny governemantam-paritra dia efa nanamafy sahady fa tena izy io taratasy io, saingy nanindry fa tena ara-dalàna tsara ilay fanaovana fifampiraharahàna. Laviko ny tohan-kevitra avy amin'izy ireo. Avy eo nalefan-dry zareo fiaramanidina ny mpitarika 6 mba ho any Guangzhou, omaly, ary nianiana ry zareo fa tsy maintsy hitany i Zhou Xiaoyun. Nampitain-dry zareo tamin'ny alàlan'ny fantson-tambajotra maro samihafa ny hafatra, nampiasa fiteny mandrahona tamin'ny voalohany, avy eo ry zareo niezaka namandrika ahy – inona no hitadiavan-dry zareo (mombamomba) ny kaontiko any amin'ny banky? Avy eo sipa iray milaza tena ho mpankafy ahy ety anaty aterineto no niezaka nambabo ahy. Henatra ho anareo, governemanta ao amin'ny fileovan'i Funing!
Ampiasaina ny teny hoe cross-province hunting, na “fihazàna ivelan'ny fari-piadidiany” 跨省追捕 mba hamaritana ny manampahefana izay mampiasa ny fahefany any ivelan'ny toerana voafaritra ho azy. Mety ho alain-dry zareo an-keriny sy entiny ho any amin'ny fari-piadidiany ilay ahiahiana avy eo mba hotsarainy. Saingy tato anatin'ny taona vitsy lasa, betsaka dia betsaka ireo cross-province hunting nitranga nikendrena ireo mpikirakira aterineto avy any ivelan'ny faritany ka namoaka ho fanta-bahoaka tety anaty aterineto ny kolikoly ataon'ireo manampahefana ao an-toerana. Nanampy [zh] vaovao misimisy kokoa i Zhou tamin'ny tolakandro:
Nandefa mpiasam-panjakana ambony 6 ny fileovan'i Funing. Ny mpitarika azy dia ny lehiben'ny departemantan'ny fampielezan-kevitra. Lehilahy vaventy lery, nihazakazaka niditra an-katezerana tao amin'ny birao ranamana. Saingy tsy nahita ahy. Jiansu Funing dia lavitra tokoa miala an'i Guangdong Guangzhou. Tsy maintsy mandalo faritany maro ry zalahy ary ny tapakilan'ny fiaramanidina taingenany dia ny mpandoa hetra no miantoka azy. Nataon-dry zalahy izay hahitàna ireo mpiara-miasa tamiko tao amin'ny fileovana sy ireo mpiray sekoly tamiko mba hampita hafatra ho ahy, milaza hoe te-hiresaka mifanatri-tava amiko ry zareo. Nandà aho. Notsikilovin-dry zareo ny kaontiko tany amin'ny banky. Fomba entiny hanapaingorana ahy ve izany? Ary raha ny momba ilay fambaboana nataon'ilay sipa, tena mety handresy lahatra an…
Ny tatitr'i Zhou Xiaoyun dia navoaka [zh] tao amin'ny gazety an-tsoratra Nanfang Weekend tamin'ny 9 Aogositra 2012. Ilay tatitra fanadihadiana dia namoaka fa ny governemantan'ny Fileovan'i Funing dia nandambolambo mpiasam-panjakana 61 teo aloha izay efa voaheloka hisazy am-ponja noho ny raharaha kolikoly, tamin'ny asam-panjakana. Araka ity antontan-taratasy nitete ity, ireo mpiasam-panjakana 61 dia nomena safidy na handray ny karaman-dry zareo nefa tsy handray ny asany marina akory, na halefa handray fisotroan-dronono feno ary hahazo no tombontsoa azon'ireo mpiasam-panjakana hafa rehetra.